Farmaajo: Ma halka uu ka doonay ciidanka difaaca shacabka, mise halka ay jiraan ?
Ciidamada Booliska oo gacanta ku soo dhigay kooxo Muqdisho ku daadiyay waraaqo digniin ah (Sawirro)
Wasiirada Arrimaha Dastuurka ee Dawladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada oo kulmay (Sawiro)
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee Dawladda dhexe iyo Dawlad Goboleedyada oo seddexdii bilba mar la qabto, shirkan oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qaybgalay dhamaan Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee Dowlad Goboleedyada dalka.
Ciidamada Xasilinta iyo Ciidamo milateri ah oo saaka ku dagaalamay Muqdisho
Iska hor imaad u dhaxeeyay Ciidamada Xasilinta Caasimadda iyo Ciidamo milateri ah ayaa saaka ku dagaalamay agagaarka Kulliyadii Jaalle Siyaad.
Ra’iisul Wasaaraha oo boggaadiyay Carwada Buugaagta Muqdisho oo sanadkii 3aad la qabtay
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta ka qeyb galay Bandhigga Caalamiga ee Buugaagta magaalada Muqdisho oo sanadkii 3aad la qabanayo.
Maxaabiis laga soo daayay xabsiyada Ethiopia oo soo gaaray magaalada Muqdisho(Sawiro)
Inkabadan boqol maxaabiis Soomaali ah kuna xirnaa xabsiyo ku yaal dalka Ethiopia ayaa fiidnimadii caawa soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Saddex nin oo dadka ka tahriibin jiray Koofurta Sudan oo Muqdisho laga soo dejiyay
Waxaa goor dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga soo dejiyay saddex nin Magafe Soomaali ah oo dadka ka tahriibin jiray dalka Koofurta Sudan, kuwaasoo dhowaan gacanta lagu soo dhigay.
Nabad Suggida oo goysay wadooyin ka mid ah Muqdisho
Ciidamada Xasilinta oo habeenkii labaad howlgal amni sugid iyo hub ka dhigis ka sameeyay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • June 3, 2017
Ciidamada wadajirka ee loogu magac daray Xasilinta Muqdisho ayaa xalay habeenkii labaad howl galo xooggan ka sameeyay degmada Dharkeenley, iyadoo howl galkan uu ahaa mid degmada kaliya laga sameeyay.
Ciidamada wadajirka ah ee loogu magac daray Xasilinta Muqdisho ayaa howl gal xalay ay ka sameeyeen degmooyinka Dharkeenley iyo Wadajir ee Gobolka Banaadir ayaa waxay ku qabteen Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab.
Kulankii Golaha Wasiirada oo loo baajiyay Olole nadaafeed maanta laga sameeyay Muqdisho
Kulankii Golaha Wasiirada ee khamiislaha ayaa maanta loo baajiyay olole nadaafeed oo maanta laga sameeyay magaalada Muqdisho, iyadoo maanta ay ku beegneyd maalinta nadaafadda Adduunka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay raadinta xuquuqda Gobolka Banaadir, isagoo ugu baaqay shacabka reer banaadir in si wanaagsan ay ku raadiyaan xuquuqda ay tabanayaan inay ka maqan tahay.
Madaxweyne Farmaajo oo maanta shacabka kala hadlaya meel fagaare ah
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta ka qeyb galaya Munaasabadda 15-ka May oo ku beegan 74 guuradii ka soo wareegatay aas aaska Ururkii gobonimo doonka Soomaaliyeed ee SYL.
Gaadiidka AMISOM oo laga mamnuucay Wadada Maka Al-Mukarama
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa wareegto uu soo saaray ku mamnuucay in Gaadiidka kala duwan ee AMISOM ay isticmaalaan Wadada Maka Al-Mukarama.
Diyaaradihii qaadka ee imaan jiray Muqdisho oo maanta ka degay Garoonka Magaalada Jowhar.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka hadlay Qarax loo dhigay Wafdi uu la socday
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mida Culimadda Soomaaliyeed islamarkaana Xubin ka ah Guddiga Gurmadka Abaaraha ee Heer Qaran oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Wafdi isugu jira Guddiga Gurmadka Abaaraha,Maamulka Gobolka Banaadir iyo Saraakiil ka socota Dowladda Imaaraadka Carabta oo Marayay Degaanka Sarkuusta ee Duleedka Muqdisho loo dhigay Kolonyo Gaadiid ah oo ay wateen Qarax Miino.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha oo ka qeyb galaya Munaasabada 12-ka April
Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo xiran dareyska ciidanka Milateriga ayaa ka qeyb galaya munaasabada 12-ka April ee sanad guuradii 57aad ee ka soo wareegatay markii la aas aasay Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Ciidamo Kumaandoos ay tababaray Imaaraadka Carabta oo tababar loogu soo xiray Muqdisho
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa maanta Tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan Kumaandooska Ciidanka xoogga dalka oo lagu tababaray xero ciidan ay maamulaan dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo ku taal Muqdisho.
Taliyihii saldhigga Booliiska degmadda Xamar-weyne oo shaqada laga joojiyay
Wasiirka Amniga Qaranka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow (Ducaale), ayaa xalay shaqadii ka joojiyay taliyaha saldhigga Booliiska degmadda Xamar-weyne G/dhexe Cabdulqaadir Axmed Shire.
War Deg-deg ah :Hoobiyayaal ku dhacay qeybo ka mid ah degmda Wadajir
Tira hoobiyaal ah ayaa goor dhaw oo manta ah ku soo dhacay nawaaxiga isgooyga danwadaagaha ee magaalladda Muqdisho, sida dad goobjoogayaal ah ay sheegeen.
DEG DEG: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Taliyaha Nabadsugida oo la magacaabay
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa goor dhow ansixiyay magacaabista Taliyaha Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha Midowga Afrika Mousa Faki oo soo gaaray Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • March 18, 2017
Wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Mousa Faki ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo si weyn loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Qaar kamida Wadooyinka Magaalada Muqdisho oo Saakay Xiran
Qaar kamida Wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa Saakay Xiran,waxaana Wadooyinka lagu jaray Gaadiidka Dagaalka,iyadoo Ciidamo badan la keenay Isgoysyada waawayen ee Magaalada gaar ahaan Wadada Maka Al-mukarama.
Ku dhawaaqista Magacyada Golaha Wasiirada Soomaaliya oo dib u dhacday iyo sababta
Sagal Radio Services • News Report • March 16, 2017
Ku dhawaaqista Liiska Magacyada Golaha Wasiirada Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo lagu waday in la shaaciyo fiidnimadii caawa ayaa dib u dhacday illaa iyo dabayaaqada todobaadka soo aadan , gaar ahaan mid ka mid ah Maalmaha ay taariikhdu ku beegan tahay March 21, 22 iyo 23 .
Faah faahin ka soo baxaya iska hor imaad xalay ka dhacay Suuqa Xoolaha
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada ammaanka dowladda iyo dabley hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay ka dhacay Xaafada Suuqa Xoolaha ee degmada Huriwaa.
Dowladda Soomaaliya oo maanta dalka ka musaafurisay Labo Muwaadin Kenyan ah (Sawirro)
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta dalka ka musaafurisay labo muwaadin Kenyan ah oo dalka ku jooga sharci darro ku joogay, kuna shaqeysanayay.
Ra’iisal Wasaaraha oo shacabka kala qeyb galay Salaad Roob doon iyo Duco ah
Iyadoo uu horay u iclaamiyay madaxweynaha dalka Salaad Roob doon ah maalinta Taladaada oo maanta ku beegan, ayaa Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Xasan Cali Kheyre waxa uu shacabka kula tukaday Masaajidka Isbaheysiga Islaamka Salaad Roob doon iyo duco ah, in Abaarta alle ka dulqaado umadda.
Ciidamo gadoodsan oo xirey qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho
Ciidamo gadoodsan ayaa la sheegay inay xireen qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqisho gaar ahaan isgoyska mashquulka badan ee Zobbe, KM4 iyo wadooyinka ku dhow dhow.
Sagal Radio Services • News Report • March 9, 2017
Ciidanka Dowladda oo qof rayid ah ku dhaawacay Taree Biyaano
Ciidamada Dowladda ayaa waxaa ay goordhow xaafadda Tareebiyaano ku dhaawaceen qof Rayid ah oo ka shaqeynayay dhisme ay leedahay Sharikadda Dahabshiil.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in 22-ka bishan oo ku beegan Arbacada soo socota la hakiyay dhamaan duulimaadyadii garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Sagal Radio Services • News Report • February 11, 2017
WARBIXIN : wararkii ugu danbeeyay doorashada madaxweynaha ee maalinta beri ah dhaceysa
Saacado oo kaliya ayaa ka harsan waqtiga loo balamay doorashada madaxweynaha Soomaaliya hogaamin doona afarta sanno ee soo socta oo 22 musharax isugu soo hareen kadib markii labo musharax ay sheegeen in ay isaga hareen tartanka doorashada.
Ololihii ugu xoogganaa habeen iyo maalin oo bilowday, Musharaxiinta oo aan seexan doonin (Warbixin)
Sagal Radio Services • News Report • February 6, 2017
Iyadoo labo maalin ay ka harsan tahay doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya olole aad u xooggan oo Musharaxiinta ugu jiraan in loo doorto xilka Madaxweynaha, waxaana la galay xilli mashquul ah oo ay adkaan doonto in musharax walba waqti u helo inuu cunno raashin ama uu seexdo.
Dhalinyarada laga soo masaafuriyay Maraykanka oo eedeeyay safaarada Soomaaliya
Dhalinyaro laga masaafuriyay wadanka Maraykanka ayaa waxa ay ku eedeeyeen safaarada Maraykanka ay ku leedahay Maraykanka inay mas’uul ka ahayd in dib loogu soo celiyo dalka Soomaaliya.
Maamulka gobolka Banaadir oo qaadaya dhagxaanta lagu gooyay qaar ka mid ah jidadka Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa bilaabay howlgal lagu qaadayo dhagxaanta lagu gooyay qaar ka mid ah jidadka magaalada Muqdisho, taasoo dhibaato ku ah isku socodka dadka iyo gadiidka caasimada.
Sawirro: Xildhibaanada labada Aqal ee Hirshabeelle oo xalay shahaadooyin lagu guddoonsiiyay Muqdisho
Munaasabad lagu guddoonsiinayay shahaadooyin Xildhibaanada labada Aqal ee laga soo doortay Hirshabeelle ayaa xalay ka dhacday magaalada Muqdisho, iyadoo munaasabadan ay ka qeyb galeen Madaxweynaha Hirshabeelle, Madaxweyne kuxigeenka, Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Xildhibaanada labada Aqal.
Qarax xooggan oo goor dhow ka dhacay agagaarka Gurigii Hooyooyinka
Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay agagaarka Gurigii Hooyooyinka ee ka soo hor-jeeda Xarunta Tiyaatarka Qaranka, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo.
Tirada Dadkii ku dhintay Qaraxii ka dhacay Agagaarka Dekedda oo Korortay
Ugu yaraan 30 Qof oo isugu jira Shacab iyo Ciidan ayaa ku dhintay Qaraxii Saakay ka dhacay Agagaarka Dekedda Weyn ee Magaalada Muqdisho sida aan ka helnay Goobjoogeyaal iyo Saraakiisha Goobaha Caafimaadka.
Doorashada Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi oo dib u dhac ku yimid
Doorashadii Aqalka Sare ee xubnaha ka soo jeeda Gobolada Waqooyi ee Somaliland oo maanta lagu waday inay ka dhacdo magaalada Muqdisho ayaa dib u dhac ku yimid.
Shimbir kasoo Ambabaxay Waaqooyiga Shiinaha oo soo Gaartay Xeebaha Muqdisho ee Somalia
Sagal Radio Services • News Report • December 7, 2016
Shimbirka Meng, ayaa Socdaal dhib badan kaddib si nabad kusoo gaaray Soomaaliya, isagoo hadda ku sugan xeebaha Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Sagal Radio Services • News Report • November 30, 2016
Hey’addaha ammaanka ayaa xalay ka shiray amniga doorashooyinka, inta lagu guda jiro doorashooyinka ka dhacaya magaalada Muqdisho, iyadoo la soo saaray awaamiir ku aadan sugida amniga Muqdisho.
Gaadiidleyda Muqdisho oo shaqo joojin sameeyay, kadib markii lagu soo rogay Ceymis qasab ah
Gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BL-ka ee ka howl gala Muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa saaka shaqo joojin sameeyay, kaddib markii lagu soo rogay bixinta Lacago Ceymiska gawaarida.
Xasan Sheekh “Muqdisho waxaa ka dhici doono shir weyne la yiraahdo Talo Qaran”
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iclaamiyay in magaalada Muqdisho uu ka dhici doono shir weyn oo uu ugu magac daray Talo Qaran, kaasoo lagu soo uruurinayo talooyinka dadka Soomaaliyeed ee dal iyo dibad.
Isu soo bax roob doon ah oo maanta ka dhacaya Muqdisho iyo gobolada dalka
Sagal Radio Services • News Report • November 14, 2016
Banaan bax Roob Doon Alle ayaa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka, kaasoo Alle looga baryayo inuu nimcadiisa iyo in uu ka dulqaado abaarta ka jirta qeybo ka mid ah gobolada dalka.
Sagal Radio Services • News Report • October 8, 2016
Afar ruux ayaa ku geeriyootay saddex kalana dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaartay shil gaari oo ka dhacay Waddada Daaru Salaam, degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir.
Meydka wariye C/Casiis Maxamed Xaaji oo maanta Muqdisho lagu aasay (Sawiro)
Alle ha u naxariistee waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay wariye C/Casiis Maxamed Cali Xaaji oo shalay gelinkii dambe lagu dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Ciidamada ammaanka oo soo gaba gabeeyay howl gallo ka socday Suuqa Bakaaraha
Howl gallo qorsheysan oo ciidamada dowladda oo ay wehliyeen Ciidamada AMISOM saaka waabarigii ka bilaabeen Suuqa Bakaaraha ayaa soo gaba gabeeyay, waxaana howl galkan uu saameeyay dhaq dhaqaaqii ganacsi ee Suuqa.
Sagal Radio Services • News Report • September 14, 2016
Sagal Radio Services • News Report/Opinion • September 12, 2016
Sagal Radio Services • News Report • September 10, 2016
Sarkaal ka tirsan Ciidamada Milateriga oo xalay lagu dilay Muqdisho
Sarkaal ka tirsan ciidamada milateriga ayaa xalay lagu dilay Xaafada agagaarka Ex Koontarool Afgooye, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan dilkiisa.
Faah Faahin: Dhisme labo dabaq ah oo ku soo dumay degmada Shingaani
Labo ruux ayaa ku geeriyootay dhisme labo dabaq ah oo xalay ku soo dumay degmada Shingaani ee Gobolka Banaadir, kaasoo ay degenaayeen dad shacab ah.
Qaar ka mid ah Shaqaalaha ka howl gala Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa saaka shaqo joojin iyo banaan bax ah ka sameeyay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha, iyagoo ka cabanaya shirkada Favori ee gacanta ku heysa howlaha garoonka diyaaradaha.
Meydka Marxuum Maxamed Cali Samatar oo maanta la keenayo Muqdisho
Waxaa saaka lagu wadaa in magaalada Muqdisho la keeno Meydka Allaha u naxariistee Marxuum S/Guud Maxamed Cali Samatar oo dhowaan ku geeriyooday dalka Mareykanka.
Madaafiic ku dhacday Xarunta Wasaaradda Gaadiidka, Cirka iyo Dhulka ee Muqdisho
Tartan lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada Adduunka oo shalay ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • August 13, 2016
Ciyaar Kubada Kolayga oo lagu maamuusayay Maalinta Dhalinyarada Adduunka ee 12-ka Agosto ayaa shalay ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Garoonka Kubada Kolayga ee EX Luujino degmada C/casiis.
Sagal Radio Services • News Report • July 27, 2016
Ugu yaraan 13 ruux oo u badan askar ayaa ku geeriyootay qaraxyo saaka ka dhacay nawaaxiga Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyadoo Taliska Booliska Gobolka Banaadir uu xaqiijiyay in qaraxyada ay geysteen labo baabuur.
Wasaaradda Amniga oo ka warbixisay howl gallo dad fara badan lagu soo qabtay
Wasaaradda Amniga Gudaha ayaa faah faahin ka bixiso howl gallo ciidamada ammaanka ka sameeyeen Xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho, kaasoo lagu soo qabtay dad ka badan 200 ruux.
Ra’iisul Wasaaraha oo Tababar u soo xiray Ciidamada Danab (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka mid ah ciidanka xooga dalka Soomaliyeed, gaar ahaan ciidanka gaarka u tababaran ee Danab oo ay Dowladda Imaaraadka Carabta gacan ka geysatay tababarkooda.
SAWIRRO: Diyaar-garow Xooggan oo loogu jiro Ciidul-Fidriga oo ka socda Magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • July 4, 2016
Muqdisho ayaa waxaa ka socda diyaar-garow xooggan oo ay shacabku ugu jiraan maalinta ciidda oo nagu soo fool leh. Waxaana Mashquul xooggan laga dareemayaa Suuqyada Muqdisho sida Bakaaraha, Xamar-weyne iyo Suuq Bacaad.
Ciidamada Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa xalay ku qabtay degmada Hodan gaari ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa iyo hub.
Faah faahin ka soo baxaya khasaaraha weerarkii Hotel Naasa Hablood
Sagal Radio Services • News Report • June 26, 2016
Faah faahin ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay galab dabley hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen Hotel Naasa-Hablood 1 oo ku yaalla nawaaxiga Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Burci Xamza oo la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday weerarkii Hotelka Naasa-Hablood
Waxaa goor dhow la xaqiijiyay inuu geeriyooday Wasiiru dowlihii Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ee dhinaca Bey’adda Xildhibaan Burci Maxamed Xamza, kaasoo ka mid ahaa dadkii ku jiray Hotelka Naasa-Hablood, xilligii uu qaraxa weyn dhacay.
Wasaradda Amniga Soomaaliya oo Sheegtay in la Fashiliyay Qarax laga soo buuxiyay Mooto Bajaaj
Sagal Radio Services • News Report • June 19, 2016
Wasaaradda Amniga Xukuumadda Somalia, ayaa sheegay in la Fashiliyay Xalay Mooto Bajaaj laga soo buuxiyay Walxaha qarxa, lana doonaayay in lagu Qalqal-geliyo Xasilloonida Caasimadda Soomaaliya.
Roobab saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka dhulka iyo hawada oo ka da’aya Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • June 16, 2016
Roobab xooggan oo mahiigaan ah ayaa ka da’aya magaalada Muqdisho, iyadoo roobabkan ay saameyn ku yeesheen isu socodka dadka iyo gaadiidka.
Muqdishadii maqneyd maanta waa muuqataa
Toban sanno ka hor Marka magaalada Muqdishu la soo hadal qaato qofka waxaa indhahiisa hor imaanayey magaalo burbursan oo qeyrkeed ka hartay xilli kastana magan u ah dhiig ku daaada oo dillkana ka ahaa mid dhaca xilli kasta balse,
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa magacaabay Guddi heer degmo ah, kuwaasoo lagula xisaabtamayo Amniga Caasimadda.
Xildhibaan ka badbaaday weerarki Hotel Ambassador oo ka sheekeynaya wixi uu indhihiisa ku arkay
Sagal Radio Services • News Report • June 2, 2016
Mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaaka federaalka Soomaaliya oo ka mid noqday dadki ka badbaaday weerarka hotel Ambassador ayaa ka warbixiyey sidi uu u dhacay weerarka.
Maxaa ka soo kordhay weerarkii Hotel Ambassador, rasaas wali la maqlayo(Sawiro)
Rasaas culus iyo qaraxyo ayaa wali laga maqlayaa gudaha Hotelka Ambassador, halkaasoo galabta dabley ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen.
Dhibaatada Shacabka Muqdisho ku qabaan gaadiidka dagaalka ee waddooyinka mara oo sii kordhaya
Waxaa sii kordhaya dhibaatada shacabka ku qabaan isticmaalka waddooyinka Muqdisho, iyadoo ay joogto noqotay in ciidamada hubeysan ee saaran gaadiidka dagaalka iyo kuwa lagu ilaaliyo Mas’uuliyiinta ay rasaas aan loo meel dayin ku furaan dadka rayidka ah ee wata gaadiidka iyo kuwa saaranba, marka ay wadada marayaan.
Dadkii loo haystay weerarkii diyaaradda Daallo oo markale la horkeenay Maxkamadda Ciidamada (Daawo Sawirada)..
Sagal Radio Services • News Report • May 23, 2016
13 qof oo lala xiriirinaayo inay fududeeyeen weerarkii qaraxa loo adeegsaday, ee 2-dii bishii February lagu weeraray mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda Daallo Airlines, ayaa markii labaad ka soo muuqday Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Madaxweynaha oo khudbad u jeediyay Baarlamaanka, kana dalbaday inay ansixiyaan hanaanka doorashooyinka
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa gaaray xarunta Golaha Shacabka, halkaasoo uu shir uga socdo Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka, iyadoo Xildhibaanada ay kaga doodayaan hanaanka geeddi socodka doorashooyinka ee uu bishii hore u soo gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha.
Sawirro: Dibad bax ballaaran oo lagu dalbanayo xuquuqda Gobolka Banaadir oo ka dhacay Muqdisho
Banaan bax ballaaran oo ay ka qeyb galaan boqolaal shacab oo ay hogaaminayaan Madaxda Maamulka Gobolka Banaadir, Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka iyo siyaasiyiin ayaa saaka ka dhacay Fagaaraha Daljirka Dahsoon, waxaana banaan baxan lagu dalbanayay in Gobolka Banaadir ay hesho xuquuqda ay ku leedahay Aqalka sare ee Baarlamaanka.
Wasiirro ka tirsan Xukumadda Soomaaliya oo Kormeeray Garoonka Stadium Muqdisho
Wasiirka Amniga Xukumadda Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed iyo Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha Maxamed C/llaahi Xuseen “Nuux” ayaa maanta kormeeray Garoonka Cayaaraha ee Stadium oo ay dagan yihiin Ciidamada Midawga Afroka ee AMISOM.
Banaanbax lagu Taageerayo Xilka qaadistii Ilka-xanaf oo Muqdisho ka dhacay”Sawiro”
Banaanbax uu soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir islamarkaana looga soo horjeedo Xilka qaadistii Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Dalka Abuukaate Caydiid C/llaahi Ilka-xanaf ayaa maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Daljirka daahsoon.
Wasaaradda Amniga gudaha ayaa sheegtay in la qabtay dad looga shakisan yahay weerarkii habeen hore lagu qaaday guri uu deganaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka oo lagu magacaabo Malaaq Aadan Ibraahim Dhaayow.
Mooshinkii laga keenay shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo la xaliyay
Sagal Radio Services • News Report • April 23, 2016
Guddoonka Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xaliyay mooshinkii muranka dhaliyay ee laga keenay shirka Jowhar ee maamul u sameynta Labada Gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Ciidamo ka tirsan Milateriga oo xalay dad rayid ah ku dilay degmada Hodan
Ciidamo ka tirsan Milateriga Soomaaliya ayaa xalay fiidkii saddex ruux ku dilay xaafada Al-Baraka ee degmada Hodan, iyadoo markii dambe lagu guuleystay in la qabto askartii dilalka geystay.
Wafdi ka socda dowladda Hoose ee Istanbul oo qiimeyn ku sameeyay wadada 30-ka (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • April 18, 2016
Haween saacadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalada Muqdisho
Illaa labo haween ah ayaa saakay iyo xalay lagu dilay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho, iyadoo dilalkaas ay geysteen kooxo hubeysan, kuwaasoo baxsaday.
Howl galo boqolaal ruux lagu soo qabtay oo xalay laga sameeyay degmada Yaaqshiid
Faah faahin ka soo baxaya weerarkii lagu dilay Muwaadiniinta Turkiga ah
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa cambaareysay weerarkii lagu dilay shaqaalihii Turkiga ee ka howl galayay magaalada Muqdisho, markii dabley hubeysan ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen.
Ciidamada Nabadsugida oo saaka degmada Hodan ku qabatay gaari qarax laga soo buuxiyay
Duqa Muqdisho oo la kulmay Shaqaalaha dowladda Hoose ee Mushaarka u qaata Shiling Soomaaliga
Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa la kulmay Shaqaalaha dowladda Hoose qeybta mushaarka ku qaata lacagta Shiling Soomaaliga, kuwaasoo uu ugu baaqay inay laba-laabaan howlahooda.
Sagal Radio Services • News Report • February 21, 2016
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ee Xukuumaddii Nuur Cadde oo lagu dilay qarax+Sawirro
Muxiyaddiin Xasan Xaaji oo horay xilal kala duwan u soo qabtay ayaa goor dhow ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa, xilli uu marayay agagaarka Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Diyaaradda Turkish Airlines oo maanta Muqdisho ka soo degatay
Diyaaradda Turkish Airlines oo Maalmihii la soo dhaafay aan ka soo degan Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde Ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay maanta ka soo degatay Garoonka Muqdisho.
Duqa Muqdisho “Qorshayaal wax looga qabanayo Amniga ayaa wadnaa”
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ku dhawaaqay qorshayaal wax looga qabanayo ammaanka Caasimadda, iyadoo muddooyinkii u dambeeyay magaalada ka dhacayeen qaraxyo iyo dilal.
Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo lagu soo kordhiyay eeyo baaraya Laptop-yada
Iyadoo 2-dii bishan qarax uu ka dhacay gudaha Diyaaradda Daallo Airlines, taasoo la rumeysan yahay inuu ka dhashay Laptop ku jiray waxyaabaha qarxa oo uu qof ka mid ah rakaabka diyaarada watay, ayaa waxaa si xoogan loo adkeeyay ammaanka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan baaritaanada Diyaaradii la qarxiyay ee Daallo (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • February 8, 2016
Waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan diyaaradii ka badbaaday qarax ka dhex dhacay toddobaadkii hore, waxayna shirkada Daallo ku eedeysay shirkada Turkish Airlines inay lahayd rakaabkii saarnaa diyaaradii Daallo ee qaraxu ka dhacay.
Madaxweynaha iyo Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey oo ku kulmay Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Xarunta Madaxtooyada ku qaabilay Ku Xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee dhinaca arrimaha siyaasadda, Danjire Jeffrey Feltman oo maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho.
Banaan bax lagu taageerayo Nabadda iyo howl galada amniga lagu sugayo oo Muqdisho ka dhacay
Boqolaal dadweyne ah ayaa maanta isugu soo baxay degmada Warta Nabadda ee ka tirsan gobolka Banaadir, iyagoo dhigay bannaanbaxyo ay ku taageerayaan nabadda magaalada Muqdisho iyo cirib tirka kooxda Al-Shabaab, iyagoona watay boorar ay ku muujinayaan shucuurtooda.
Wararkii ugu dambeeyay shirka madasha wada tashiga iyo khudbadaha Madaxda ka jeediyeen
Shirka wadatashiga doorashada oo maanta la soo gabagabeynayo
Shirka wada tashiga ah ee u dhaxeeya dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho.
Shirka looga hadlayo Hiigsiga sanadka 2016 oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho.
Ciidamada Nabadsugida oo bar koontaroolo cusub ka sameystay wadooyin laga soo galo Muqdisho (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • July 26, 2015
FAAHFAAHIN: Weerar ay Al-shabaab ku Qaaday xero lagu Tababaro Sirdoonka DF Soomaaliya
Ugu yaraan Shan Ruux ayaa ku Dhintay Weerar isugu jiray ismiidaamin iyo mid toos ah oo ay xoogag ka tirsan Al-shabaab ku qaadeen saakay xarunta ay ku tababartaan ciidamada sirdoonka dowladda Somalia oo ku taalla degmada Shibbis ee Gobolka Banaadir.
Maxkamada Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka aroortii dil toogasho ah ku fulisay Shuceyb Ibraahim Mahdi iyo Faarax Cali Cabdi, kuwaasoo horay uga soo muuqday muuqaal ay ku qiranayaan inay ka dambeeyeen dilalka Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Saraakiisha Booliska oo ka hadlay howl gal lagu soo bad baadiyay gabar 14 bilood jir lagu afduubtay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • May 10, 2015
Saraakiisha Booliska degmada H/wadaag ayaa faah faahin ka bixiyay howl gall ciidanka Booliska iyo kuwa Nabadsugida ay ku soo bad baadiyeen gabar 14-bilood jir aheyd oo 24-saac afduub loo heystay.
Guddoomiye kuxigeenkii degmada Wadajir oo saaka lagu dilay Muqdisho
Dabley hubeysan oo gaari wadatay ayaa saaka abaarihii 8-dii subaxnimo ku dishay xaafada Nasteexa Guddoomiye kuxigeenkii degmada Wadajir iyo qaar ka mid ah Ilaaladiisa.
Kooxo hubeysan oo Suuqa Bakaaraha ku dilay Sarkaal horay uga tirsanaa Ahlusuna
Kooxo hubeysan ayaa gelinkii dambe ee shalay ku dilay Suuqa Bakaaraha Sarkaaal horay uga tirsanaa Ahlusuna, kaasoo dhowaan ka yimid dalka Koofur Afrika.
Shacabka Muqdisho oo Muujiyay Aragtidooda ku Aadan Xayiraada Xawaaladaha Dalka Kenya
Shacabka Muqdisho ku nool ayaa si adag u cambareeyay go’aanka ay Kenya ku xirtay xawaaladaha iyo xayiraddii ay saartay shaqsiyaad Soomaali u badan, iyadoo sheegtay inay maal-geliyaan Al-shabaab.
Sagal Radio Services • News Report • April 6, 2015
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabayay Xuseen Maxamuud Muuse oo ku magac dheeraa Xuseen Baantuu ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho, kadib markii mudooyinkii u dambeeyay uu xanuunsanayay Xildhibaanka.
Sawirro: Weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho
Ku dhowaad toban ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin ah iyo mid toos ah oo galabta lagu qaaday Hotelka caanka ah ee Maka Al-Mukarama.
Nin la dhashay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo xalay lagu dhaawacay Muqdisho
Nin la dhashay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xalay kooxo hubeysan ay ku dhaawaceen magaalada Muqdisho.
Dab khasaare hantiyad geystay ayaa goor dhoweyd ka kacay kaalin shidaal ku taal agagaarka Isgoyska Black Sea ee degmada H/wadaag ee Gobolka Banaadir, iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababaha dabkan uu ku bilowday.
Duullimaadyadii Qaadkii Muqdisho la Keeni Jiray oo Maanta dib loo billaabay
Duulimaadyadii diyaaradaha Qaadka ee Soomaaliya ayaa dib u soo billowday manta oo Arbaco ah, kaddib dhowr casho oo uu hakad ku yimid dhoofinta Jaadka Soomaaliya looga keeni jiray dalka Kenya.
Taliyihii Nabadsugida Gobolka Banaadir iyo kuxigeenkiisa oo xilalka laga qaaday
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Taliyihii Nabadsugida Gobolka Banaadir iyo kuxigeenkiisa xilalkii laga qaaday, iyadoo lagu bedelay shaqsiyaad cusub oo horay xilal amni u soo qabtay.
Ciidamada Ammaanka oo saaka howl gallo dad lagu qab qabtay ka wada degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir
Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa saaka howl gallo ka wada degmooyinka Xamar weyne iyo Xamar Jajab, iyadoo ilaa iyo hada howl galka lagu soo qabtay dad fara badan oo dhalinyaro u badan.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo goor-dhow lagu dilay Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa goor-dhow ku dilay Muqdisho Xildhibaan Cabdullaahi Khayraad Barre oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, xilli maanta lagu waday in codaka kalsoonida ah loo qaado xukuumaddii uu dhawaan soo dhisay ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke.
Diyaar garowgii u dambeeyay oo lagu soo dhoweynayo Madaxweynaha Turkiga oo socda (Sawirro)
Diyaar garowgii ugu dambeeyay ee lagu soo dhoweynayo Madaxweynaha Turkiga ayaa ka socda garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasoo lagu wado inuu goor dhow ka soo dego Madaxweyne Erdogan iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo.
Wadooyinka magaalada Muqdisho oo maalintii saddexaad xiran iyo dadka oo lugeynaya
Waxaa xiran qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan waddooyinka soo gala madaxtooyada Soomaaliya iyadoo wararka ay sheegayaan in loo xirey soo dhoweynta wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo lagu wado in dhowaan uu soo gaaro magaalada Muqdisho.
Sidee Shacabka Muqdisho u dareemeen Xukuumada uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaare Sharma’arke ?
Ugu dambeyn waa ay soo ban baxday wixii la hadal haayay Hashii Mudaba Foosheedii la Saadaalinaayey waa ay Curatay Allow Mid Caafimaad qab ah ka dhig.
Ammaanka magaalada Muqdisho oo loo adkeeyay shirka Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD
Hay’adaha amniga oo amaro ku soo rogay ganacsatada kireeysa gaadiidka magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • December 12, 2014
Hay’adaha ammaanka dalka ayaa waxa ay ku soo rogeen amaro cusub shirkadaha kireeya gaadiidka ee magaalada Muqdisho. Shirkadaha ayaa la amray inaysan ka kireyn kirin gaadiidkooda shaqsi,hay’ad iyo weliba shirkado illaa ay ka haystaan fasax hay’adaha amniga. Amarkan ayaa imaanaya iyadoo dhawaanahan ay magaalada Muqdisho ku soo badanayeen dilalka lagu geysto gaadiidka, kuwaasoo ay intooda badan mas’uuliyaddooda sheegato Xarakada Al-shabaab.
Injineer la shaqeynayay Shirkadaha Turkiga oo lagu dilay qarax gaarigiisa loogu xiray
Nin Injirneer ahaa oo u shaqeynayay mid ka mid ah shirkadaha Turkiga ee dhismaha ka wada magaalada Muqdisho ayaa Shalay lagu dilay qarax loogu xiray gaari uu watay, kaasoo ka dhacay nawaaxiga Maxfalka ee degmada Shibis.
War Deg Deg ah:Munaasabad ay xilka kula wareygeyso shirkad Turkish ah oo ka socota Dakada Muqdisho.
Wararka laga helaayo Dakada Wey nee Magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in ay ka socoto munaasabad ay xilka kula wareygeyso Shirkada laga leeyahay wadanka Turkiga taasi oo maal mahaanba aheed mid si aad ah loo hadal hayay.
Nabadsugidda oo Albabbaada isugu dhuftay Idaacadaha Kulmiye iyo Simba
Ciidanka nabadsugidda Qaranka ayaa albaabada u laabay saaka idaacadaha Kulmiye FM iyo Simba FM oo ka mid ah idaacadaha ka howlgala Muqdisho, iyadoo shaqaalihii idaacadahaasna qaarkood xabsiga loo taxaabay.
Madaxda Qaranka Dalka iyo Xubnaha Golaha amaanka ee Q.Midoobey oo kulan ku leh Muqdisho
xunbnaha joogta ah ee golaha amaanka ee Qaramada Midoobay oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa kulankoodu waxa uu ku saabsanyahay Soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka yihiin kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xassan Sheekh Maxamuud, Gudoomiyaha Barlamaanka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Ra’isuwlasaaraha xukuumadda federaalka ah mudane C/weli Sheekh Axmed Maxamed,
Ciidamada Dowlada oo Maanta Muqdisho ku dilay Nin hubeesan oo dilay Askari katirsan Ciidanka Dowlada
Ciidamo katirsan Dowlada Soomaaliya ayaa maanta agagaarka Wasaarada Gaashaandhiga ee Magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen nin la sheegay in uu hubeesnaa uuna dil u geestay askari katirsanaa Ciidanka Dowlada.
Gaari ku qarxay Muqdisho iyo Ilaalada Ra’iisul waasaraha oo dilay Qof rayid ah
Gaari waxyaabaha qarxa a ku xirnaayeen ayaa xalay ku qarxay garaash ku yaalla agagaarka isgoyska Dabka ee Muqdisho, isagoo aan geysan wax khasaare nafeed ah. Iyadoo ilaalada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay isla xalay toogteen qof rayid ah.
Ciidamo katirsan Dowlada oo ay ilaalinayaan Ciidamo kale oo lagu arkay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho!!
Waxaa Qaar kamid ah Wadooyinka Magaalada Muqdisho lagu arkay Ciidamo katirsan kuwa Nabadgalyada Wadooyinka Taraafikada ay kor ka ilaalinayaan Ciidamo kale oo katirsan Dowlada oo isugu jira Booliis iyo Nabad Sugid.
Ciidamada dowladda oo howl galo ka wada qeybo ka mid ah Jidka Maka Al-Mukarama -
Ciidamada dowladda ayaamanta howl galo ka wada qeybo ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama, iyadoo isgoys walba ay ciidamada ku sugan yihiin, waxaana howl galkan ka qeyb qaadanayay ciidamo Boolis iyo Nabadsugid.
War Deg Deg Ah Qarax gaari lagu soo xiray oo goordhaw ka dhacay Magaalada Muqdisho
War goordhaw kusoo dhacay ayaa sheegaaya in gaari uu lahaa Masuul katirsan Dowlada Soomaaliya uu ku qarxay Degmada Xamar Weyne ee Gobolka Banaadir.Qaraxa ayaa la sheegay in uu ka dhashay gaari meel yaalay uu leeyahay sida aan Wararka ku helnay Maareeye kuxigeenka qeynta Canshuuraha ee Dakada Muqdisho , mana jiraan ...
Kooxo hubeysan oo Askar ka tirsan Ciidamada Taraafikada ku dilay Muqdisho
Kooxo hubeysan oo watay gaari kuwa raaxada ah ayaa maanta ku toogtay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir laba askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada waddooyinka ee Taraafikada.
Kooxo hubeysan oo Xildhibaan ku dilay Muqdisho mid kalena Dhaawacay
Kooxo hubeysan ayaa goor-dhow ku toogtay Muqdisho Xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayd oo ka mid ahaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya halka ay dhaawaceen xildhibaan, Cabdullaahi Axmed Coonka.
Roobab Saameyn ku yeeshay Barakacayaasha oo illaa xalay ka da’ayay Muqdisho
Illaa xalay fiidkii waxaa magaalada Muqdisho ka da’ayay roobab xooggan, kuwaasoo saameyn ku yeeshay barakacayaasha ku nool Muqdisho iyo daafaheeda, kuwaasoo markii horeba ay xaaladoodu aad u liidatay.
Masiibo ku soo fooleh Bulshada Muqdisho Degan hadaan laga Hor tagin
War la yaab leh oo Qofka damiirka leh Ee Soomaaliga ah uu Marka uu Dhageysto ama uu daawado aad uga Xumaanayo ayaa Radiokulmiye Akhristaashiisa ku xiran uu Halkaan ugu soo Gudbinayaa Iyadoo Dhacdadaan ay u Baahantahay in QOf Kasta oo Mawaadin ah uu ka qayb qaato ka hortagisteeda.
Mid kamid ah Shaqaalaha Turkiga ee kusugan Magaalada Muqdishooo goordhaw la toogtay
Kooxo hubeesan oo gaari watay ayaa goordhaw Isgooska KM-4 ee Magaalada Muqdissho waxa ay ku toogteen mid kamid ah Shaqaalaha Turkida ee ka howlgala Caasimada Muqdisho xili uu gaari uu watay.
Ciidamo wada jir ah oo howl-gal amniga lagu sugayo Muqdisho ka sameeyay
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saakay howlgallo xooggan kawada degmada Xamar-jajab ee gobolka Banaadir, iyagoo xayiran dhammaan waddooyinka gala degmadaas.
Howl-gallo Amniga lagu sugayo oo Muqdisho ka socda
Sagal Radio Services • News Report • May 18, 2013
Dowladda Britain oo ka digtey weeraro argagixisnima oo ka dhici kara Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • April 6, 2013
Dowladda Britain ayaa soo saartay digniin cusub oo ay uga digayso muwaadiniinteeda inay booqdaan Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho oo ay sheegtay inay ka dhici karaan falal aragagaxiso oo ay ka mid yihiin qaraxyo.
Xarun cusub oo loogu tala galay hooyada iyo dhallaanka oo Muqdisho laga furey
Xarrun cusub oo loogu tala galay hooyada iyo dhallaanka, ayaa maanta laga furey degmada Shibis ee gobolka Banaadir, iyadoo munaasbaaddii xarriga looga jaraayay xarruntaasina ay ka dhacday isla gudaha degmada Shibis.
Madaxweyne Xasan oo ammaanay nabad-sugidda iyo AMISOM oo sheegtay in amniga Muqdisho uu yahay mid la isku halleyn karo
Afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM, Col. Cali Aaden Xumad, ayaa sheegay in ammaanka Muqdisho hadda uu yahay mid aad u wanaagsan la iskuna haleyn karayo.
Qamri, xashiishad iyo dadkii watay oo Muqdisho lagu xiray
Ciidamada booliska, ayaa maanta soo bandhigay dhalooyin qamri ah iyo xashiishad oo aad u fara badan, kuwaas oo ay xalay ciidamada howl gal ku soo qabteen.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo wafdi EU ka socda la kulmay & tiro badan oo Shabaab ah oo dowladda isku dhiibay
Waxa maanta Magaalada Muqdisho ku kulmay ergeyga midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Dhageyso Madaxweyne Shariif oo iska fogeeyay eedeynta Sam Ongeri
Sagal Radio Services • Audio/News Report • September 18, 2012
Madaxweynihii hore ee dowladda KMG aheyd Md. Sheekh Shariif, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa si weyn u cambaareeyay hadalkii ka soo yeeray wasiirkii arrimaha dibadda Kenya Sam Ongeri, oo dhawaan si maldahan u sheegay in Sheekh Shariif uu ka dambeeyay qaraxii 12-kii September Muqdisho ka dhacay ee lagu dili rabay Md. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo Ongeri laf ahaantiisa.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la caleema saaray
Sagal Radio Services • News Report • September 16, 2012
Madaxweynaha Jamhuurriyadda Federaalka Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay hogaaminta dalka, ka dib markii xafladdii lagu caleema saarayay ay ka dhacday magaalada Muqdisho maanta.
Madaxweyne Shariif oo ku wareejiyay madaxweynaha cusub haddiyado u badan dahab iyo agabyo kale (Sawiro+Dhageyso)
Sagal Radio Services • Audio/News Report • September 13, 2012
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Madaxweynihii DKMGa aheyd Mudane Shariif Sheekh Axmed kala wareegay Madaxtooyada Qaranka iyo hadiyado markii hore Madaxweyne Shariif si gaar ah loogusoo hadiyadeeyey kuwaasi oo dahab u badan.
Qarax afar ruux ku dilay Muqdisho
News Report • September 11, 2012
Afar ruux, ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, ka dib markii gaari ay la socdeen dad rakaab ah miino kula qaraxday meel u dhow saldhiga degmada Yaaqshiid ee gobalka Banaadir.